Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa keenay Sirdoonka iyo Ciidanka Ethiopia Jig Jiga?
Maxaa keenay Sirdoonka iyo Ciidanka Ethiopia Jig Jiga?
Posted by ONA Admin	/ September 21, 2012
Wararkii U danbeeyay ee Jig Jiga kasoo baxa: iyo ONLF oo looga shakisanyahay in Kililku ka amar qaato.
Xaalada Jig Jiga ayaa wali qasan iyada oo shaqaalihi kililka wareer badan iyo qas iyo cabsi badan ay lasoo wajahday iyaga oo lagaranayn qofka seeftu qaaday iyo qofka lawato midna.
Waxaa wararku intaas ku darayaan in Cabdi UBO iyo Cabdullaahi Ethiopia labadaasba inay xaaladoodu meel xun ku jirto wakiilnimadoodi gumeysigu ay dhamaatay. Balse warar hoose ayaa lanoogu sheegay in Cabdi UBO aan la xidhi doonin oo lasii deyn doono. Sababta loo hayayna ay aheyd baadhitaan dheer oo sirdoonka Ethiopia ku hayaan. Wali lama soo deyn balse waa lasoo deyn doona maanta illa bari haddii isbadal kale ku imaan gumeysiga oo ninkan heysta. Waxaa warkaas nasoo gaadhsiyay dad xilal sare u haya Gumeysiga.
Waxaa dood dheer u galay ciidamada Harar saraakiil kamid ah oo la sheegay in laaluush badan ay ku qabaan cabdi UBO. lacagaha Deeqda ah ee Wadamada Ree galbeedku siiyaan somalida Ogadeniya si abbaaraha looga hortago ayaa lacagtaas siday u dhantahay waxaa afka ku shubta saraakiisha Woyanaha ee ku sugan Harar.
Waxaa Saacadaha soo socda dhan u dhici doona loolan adag oo sirdoonka TPLF iyo Ciidanka Woyanaha ee Harar dhexyaala oo ku aadan Xaalada Cabdi UBO. Waxayna u badantahay in xabsi uusan galin balse Booskisa loo magacaabo ku xigeenadisa mid kamid ah. Waxaa sido kale beerta ku jira Cabdullaahi Ethiopia oo isaga loo badinayo in la xidho.
Sababata keentay Ruwayadan Cusub ee TPLF maxay tahay:
Wararka Jig Jiga kaso baxaya ee ku aadan qolyihii u adeegi jiray gumeysiga ayaa wali dhan u dhicin. Waana qorshe cusub oo taliska Woyanuhu ugu talo galay in lagu mashquuliyo dadka halgamaya ee gumeysiga daggaalka kula jira. Waxaa waayadan danbe aad usoo batay Liyuu Poliska oo isu dhiibaya Ciidamada ONLF. Sidoo kale masuliyiinta iyo shaqaalaha Kililka oo wadanka aad ugasoo fakaday. waxaaana maalin walba soogaadha Nairobi, Kenya tobaneeyo kamida shaqalaha Kililka oo magangalyo doon ah.
Gumeysiga oo hadaba gabalkiisii si dhacayo oo Kaligi taliye Zenawi sidu uga baxayba qalalaase dhexdooda ah ku habsatay ayaa cabsi badan ka qaba Shacabka Ogadeniya oo iyagu heysta awood ciidan iyo siyaasad aan laloodin karin oo Jabhada ONLF ku hoggaaminayso. Waxaana gumeysigu aad uga cabsi qabaa in si dhib yar Ciidamada ONLF uga faa ideystaan isbadalkan siyaasadeed ee ka aloosan Ethiopia.
ONLF ayaa looga cabsanaya in ay maamusho shaqaalaha Kililka waxaana sirdoonka TPLF ay shaki badan kaqabaan madaxda sare ee Kililku inay jawaasiis u wada yihiin ONLF. Waxaa gumeysigu aad uga yaabay siraha faraha badan ee ONLF ka heyso woyanaha. Iyada oo shakigan markii horeba jiray ayaa eega waxa soo dadajiyay ciidamadan kasocda Addis Ababa in la geeyo Jig jiga isbadalka aan la filayn ee ku yimid taliska sare ee TPLF.
Bilihii lasoo dhaafay ayaa waxa si joogta ah loo baadhi jiray dhamaanba madax xafiiseedyada Kililka iyo wasiirada oo Email-kooda aad lo baadhayay bal ina laga helo xidhiidh ay la leeyhiin Ururka ONLF. waxaa sido kale la dhageysta teleefankooda. Waxaa xabsiga la dhigay madax xafiiseedyo badan oo u adeegi jiray gumeysiga kuwaas oo lagu eedeyay in ONLF ay xidhiidh joogta ah la leeyihin.
Gumeysiga aya talaabada uu qaadoba saddex talaabo ka hor ay sii qaadaan shacabka geesiyiinta ah ee naftooda iyo maalkoodaba u huray sidii ay u xoreyn lahaayeen dhulkooda.
Shacabka Ogadeniya waa ka warhayaan ruwaayadan cusub ay jilayaan Gumeysigu, mana ka cabsaneyno ciidanka faraha badan ee luuqyada Jig Jiga taagan sidii oo xabadi baqdaad oo kale ka socoto saaka jig jiga. Odey kamida shacabka Ogadeniya ayaa saas yiri. Shacabku waa cabsi gooyeen dadka dibada jooga uunbaba sheegaya ciidankane dan lagamalaha. Jig Jiga Dadku waxay ka sheekaysanayaan Saaka Ururka ONLF daggaaladi u danbeyay ay qaadeen ee lagu jabiyay Woyanaha.
Xogag dheeraad ah Cabdi UBO oo Xabsiga la dhigay iyo Xisbigisi oo laga saaray Maxaa ka jira?
Warar dheeraad ah oo kasoo baxay mugdi badan oo ku jiray xaalada Cabdi UBO aya xogag aan ka helnay xubno kamid ah u adeegayasha Gumeysiga oo xilial sare u haya waxay noo xaqijiyeen in cabdi UBO uu ku jiro xabsi ku yaala Addis Ababa. ( Iyada oo xogag kale ay iyaguna maanta sheegayeen in Jig Jiga lagu hayo oo sirdoonka Woynahu illaa xalay hayeen). Wararka kasoo baxaya Jig Jiga oo wali si rasmi ah loo sheegin ayaa masuliyin kamid ah kuwa u adeega laga helay wararka oo ah kuwa ugu ag dhow.
Si kastba wararku ha u jiraane waxaa Xubinka masuulka ka ah Kililka oo magaciisa arrimo jira awgeed aaanan u sheegayn ayaa noo sheegay
In masuliyiin kamida taliska TPLF ay soo amreen Jig Jiga in lagu qabto shir dag dag ah oo looga saarayo Cabid UBO Xubinimadiisi Xisbiga iyo Gudida Fulinta labadaba looguna dooranayo Horjooge cusub.
Magacaabida Horjoogaha cusub ee gumeysiga ayaa ah mid iska dhib yar oo ku xidhan kaliya kolba cida ay wattaan TPLF.
Waxa bari imaanaya Jig JIga wafti sare oo kamida TPLF/EPRDF oo ka imanaya Addis Ababa. Kuwaas oo ka qeyb gali doona kulan dag daga oo loo qabanayo Baarlamaanka kililka ee wakiilka u ah gumeysiga.
Cadbi UBO ayaa sidaan horey idiinku soo tabinay ahaa nin larabo in qoorta loo galiyo dhamaanba danbiyadi iyo xasuuqa Joogtada ah ee ka dhaca Ogadeniya.
Cabdi UBO ayaa lagu xasuusta oohintiisi foosha xumeyd ee uu u ooyay Aabihiis Males Zenawi. Waxaa dad badan isweydinayaan ninkii oohinta kaalinta kowaad u galay ee ku mutaystay xattaa in la horkeeno aaskii Males Zenawi si caalamka oo dhan looga arko ohintisa in maalmo gudaheed la af ganbiyo.
Cabdi UBO ayaa sida aabihiisi xijaabtay Males Zenawi, ahaa nin guul daro badan kala kulmay Jaaliyadaha Ogadeniya ee Dibada isaga oo laga soo ceydhiyay Australia socdaalkisi u danbeeyay. Sidoo kale Cabdi UBO ayaa beenti uu u sheegi jiray woyanaha ee Cajalado uu ugu duubi jiray Liyu Poliska oo koox intu ka dhigo ONLF kooxna ciidamada Liyu poliska uu u duubi jiray ayaa la helay filimadii uu duubay oo dhan oo been noqday. Waxaa la helay Filimaan badan oo Ciidamo Liyu polis ah oo si been ah loo laayay filimaan laga duubay.
Filimaantan ayaa Ahaa kuwo ay saraakiil tigree ah iyo Cabdi UBO ay wada jili jireen kadibna loo geyn jiray Xarunta dhexe ee TPLF warar been ah. Kadibna lacago badan lagu lunsan jiray shaqo aysan fulinin oo magaca nabad galyada lagu qaadan jiray.
Cabdi UBO ayaa Dayuurad lagu wareejin jiray dhulka Ogadeniya halkaasna filimaan laga duubi jiray gawaadhidooda oo wadada cad meelo cayiman maraya si baranbagaado ugu noqoto oo loo dhaho waxuu aaday dhulka Ogadeniya.
Xaalada Cabdi UBO meesha uu ku danbeyn doonto ayaa wali mugdi ku jira warar badana ay Jig Jiga kasoo baxayaan… waxii kasoo kordha wararkan xaqiiqdooda waxaad kala socotaan ONA.
Yalaaa waaan kudiirsaday markay yuub u careerene Ina ilay baroor diiqdii males zanwi wuxu galay kaalinta koobaad Ana maanta in aan qosolka kaalinta koobaad galo sooma ah kkkkkkkkkkkk yaaah Nin baa laga sheegay waaan ka yaabayey imisaan ushEegnay ina ilay
Runtii Waa wax Lagu Qoslo In Caalamaka laga Daawado Cabdi Uf Oohintiisa Foosha Xun Ee aad moodid Dameer Ciyaya, Waxaase kasii yaab badan Xasuuqi Uu U geystay Bulshada Deegaanka Soomaalida Itoobiya & Maanta Cidlada Uu Taaganyahay & Waliba Ciqaabta Sugeeysa.
“SAAXIIBKII LOO XIIRYOOW ADNA SOO QOOYSO”
Waa War Wanaagsan i Uu Cabdi Ubo Uu Mugdi Kujiro.
Aduunka waxaan ka yaabaa qof loo soo diray in uu dilo dadkiisii anigu waxaan ahay qof ka soo jeeda deegaanka soomali galbeed kuna nool dalka isu taga imaaradka waxaanan taageersanahay mujaahidiinta xaq u dirirka aha ee ladagaalamaysa amxaarada iyo dhashiisa hadahaysata jigjiga ama isku sheegay inuu yahay madaxwaynaha kililka shanaad ee magiciisa la yidhaahdo xaglo wayne waxaan jecelahay inaan halakan ka sheego inaan anigu diyaar la ahay wax wal oo loo qabanaayo xoogaga xaq u dirirka somali galbeed